ဩော် …အတိတ်​တဘောင် ဩဘာထွန်းတဲ့ ဇဗ္ဗူဒီပါ လက်ျာတောင်ကျွန်းတဲ့…. (ဗန်းမော်ရွှေကူနားကဒုတိယမြစ်ကျင်းမှာ ကြက်တူရွေး ရေသောက်ပီဆိုရင် တစ်ပြည်လုံးရေကြီးတယ်တဲ့ …ကြက်တူရွေးရေငုတ်နေပြီ အထူးသတိရှိကြပါတော့ …) လွန်ခဲ့တဲ့ လက တစ်လလုံး အဲ့ပုံတွေပဲ facebook မှာတွေ့ နေရ တာ သတိမထားခဲ့ဘူး..။ ထင်လဲ မထင်ခဲ့ဘူး..။ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့ ဖြစ်လာတော့မှ သတိထားမိလာတယ်။ မဖြစ်ခင်ကတည်းက ကြိုတင် …
တရားခံပေါ်ထွက်ဖို့နီးစပ်လာပြီဖြစ်တဲ့ဗစ်တိုးရီးယားအမှုနဲ့ စတုတ္ထရုံးချိန်းအပြည့်အစုံ သြဂုတ်(၁၄) AlinnMyay​(အလင်းမြေ) ကိုကိုနဲ့ညီညီကို ဒီကိုကိုနှစ်ယောက်လုပ်တာလေလို့ပြတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တရားရုံးမှာပြသနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ အခု စတုတ္ထရုံးချိန်းမှာတော့ စီစီတီဗီမှတ်တမ်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေအပါအ၀င် တရားခံအဖြစ်သံသယ၀င်နေတဲ့သူတွေကို ဗစ်တိုးရီးယားလေးကိုမေးတဲ့အခါမှာ ကိုကိုနဲ့ညီညီပုံကိုဗစ်တိုးရီးယားလေးကရွေးထုတ်ပေးကာ ဒီကိုကိုနှစ်ယောက်လုပ်တာလေ ဆိုပြီးပြတဲ့ မှတ်တမ်းဗီဒီယိုဖိုင်ကို ပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တရားခံအဖြစ်ပေါ်ထွက်ဖို့နီးစပ်လာပြီး ဖြစ်တဲ့ဗစ်တိုးရီးယားလေးရဲ့အမှုကို ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရဦးမှာပါ။ ဒီနေ့ရုံးချိန်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အကြောင်းအရာအပြည့်အစုံကို ဗစ်တိုးရီးယားလေးရဲ့အမှုကို လိုက်ပါကူညီပေးနေသူ သက္ကမိုးညိုက လူမှုစာမျက်နှာပေါ်မှာ အခုလိုရေးသားတင်ပြထားပါတယ်။ စတုတ္တရုံးချိန်း စတုတ္တရုံးချိန်းမှာ ကလေး …
ကိုယ်ပိုင်နေအိမ်လေး တစ်လုံးလောက် ဝယ်နိုင်ဖို့ဆိုတာ လူအတော်များများရဲ့ အိပ်မက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ငွေကြေး စီမံခန့်ခွဲမှု မတတ်၍သော်၎င်း၊ အခြားအကြောင်းအရာမျိုးစုံတို့နဲ့ ဒီအိပ်မက်လေးဟာ အိပ်မက်အဖြစ်မှာပဲ ရပ်တန့်နေတဲ့သူတွေသာများပြီး အကောင်အထည်ပေါ်အောင် တစ်ကယ်လုပ်သွားနိုင်တဲ့လူက နည်းပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံက အမျိုးသမီးတစ်ဦးကတော့ ၁၆ နှစ်တိုင်တိုင် တစ်ရက်မှာ ဂျပန်ယန်း ၁၅၃ (ကျပ် ၂,၁၆၂) သာ သုံးပြီး စုဆောင်းခဲ့ရာမှ သူ့အသက် …
ဆရာမင်းသိင်္ခ၏တပည့် ဆရာဇင်ယော်နီရဲ့ တစ်ပါတ်စာ မနောမယ ဟောစာတန်း
သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်နေ့မှ သြဂုတ်လ ၂၀ ရက်နေ့အထိ ကံ ဉာဏ် ဝီရိယ သုံးချက်လုံးအားကောင်းအောင် ကြိုးပမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေသော် … ဇင်ယော်နီ တနင်္ဂနွေ ( သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်နေ့မှ သြဂုတ်လ ၂၀ ရက်နေ့အထိ) ဆရာဇင်ယော်နီ ရဲ့ တပတ်စာ မနောမယ ဟောစာတမ်း… 1 တနင်္လာ ( …
နေပြည်တော်က Wisdom Hill မူကြိုကျောင်းမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကလေးသူငယ် လိင်အကြမ်းဖက်မှုကို ကျူးလွန်ခဲ့သူဟာ ဆရာမ ဒေါ်ဥမ္မာလှိုင်ရဲ့သား ၂ ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကိုကိုနဲ့ ညီညီ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ကာယကံရှင် ဗစ်တိုးရီးယား ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တခုကို တရားလိုတွေက ဒီနေ့ ပြုလုပ်တဲ့ ဒက္ခိဏခရိုင် တရားရုံးက တင်ပြလိုက်ပါပြီ။ ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာ တီချယ်နှင်းနု၊ ကိုကို၊ ညီညီ၊ …
ကဲ ရှင်းသွားပြီနော် သမီးလေး ဗစ်တိုးရီးယားကို ဓာတ်ပုံပြပီးမေးလိုက်တာ……
ကဲ ရှင်းသွားပြီနော် သမီးလေး ဗစ်တိုးရီးယားကို ဓာတ်ပုံပြပီးမေးလိုက်တာ…… ဒီကြောင်းကိုတော့ မပိုးဖြူအကောင့်ကနေပီတင်ထားတွေ့ရပါတယ် …. သတင်းအမှန်ဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်… ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာတော့ စောင့်မျှော်နေကြယုံပဲ ရှိပါတော့တယ်…. အမှန်တရားအတိုင်း အမြန်ဆုံးပေါ်ပေါက်ပါစေ….. မပိုးဖြူ ရေးတင်ထားတာကတော့…အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်…. ကဲ ရှင်းသွားပြီနော် V သမီးလေးကို ဓာတ်ပုံပြပြီး ရွေးခိုင်းလိုက်တော့ အောင်ကြီးကို V သမီးလေးကမသိဘူးတဲ့ရှင်းလား ကိုကို ညီညီ ဓာတ်ပုံပြတော့ သမီးကိုလုပ်တာ …
ဒီနေ့ရုံးချိန်းမှာ ဗစ်တိုးရီးယားလေးရဲ့ဖခင်၏ ထွက်ဆိုချက်(ရုပ်သံ)
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားခံရတဲ့ အသက် ၃ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးငယ် ဗစ်တိုးရီးယားအမှုရဲ့ သြဂုတ် ၁၄ ရက်နေ့ လေးကြိမ်မြောက် ရုံးချိန်းမှာတော့ တရားလို ဖခင်ဖြစ်သူက ကလေးငယ်ကျောင်းရဲ့ စီစီတီဗီမှတ်တမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကလေးငယ် ပြောဆိုချက်တွေကို တရားခွင်မှာ ထွက်ဆိုချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ လေးကြိမ်မြောက်ရုံးချိန်းမှာ ကလေးငယ်ရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူက ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သူ့ဇနီး ဆက်သွယ်ပြောကြားလို့ သိရတဲ့ အခြေအနေ၊ ရဲစခန်းမှာ …
ရန်ကုန်​မြို့ ဆယ်​မိုင်​ကုန်းမှလာ၍ ဂျိုင်းရွာဘက်​ခြမ်း ကားလမ်းမှာ ​နေ့စဉ်​ထမင်းဟင်းချက်​ လှူဒါန်း​နေ​သော ထူးခြားတဲ့အလှူရှင်​မိသားစု။
ရန်ကုန်​မြို့ ဆယ်​မိုင်​ကုန်းမှလာ၍ ဂျိုင်းရွာဘက်​ခြမ်း ကားလမ်းမှာ ​နေ့စဉ်​ထမင်းဟင်းချက်​ လှူဒါန်း​နေ​သော ထူးခြားတဲ့အလှူရှင်​မိသားစု။ ကျုံဒိုးမြို့ ဂျိုင်းတံတား ဂျိုင်းရွာဘက်​ခြမ်း မှာ လမ်း​ရေ​ကျော်​​နေ၍ ရက်​သတ္တပတ်​ခန့်​ ယာဉ်​​ကြောပိတ်​​နေသဖြင့်​ ခရီးသွားပြည်​သူများ စား​ရေး​သောက်​​ရေး အခက်​အခဲမရှိရ​လေ​အောင်​….. ထမင်းဟင်းများကို လမ်းတွင်​ချက်​၍ ​နေ့စဉ်​ လှူဒါန်း​ပေး​နေ​သော ရန်​ကုန်​မြို့ ဆယ်​မိုင်​ကုန်း မှ အလှူရှင်​ ​ဒေါ်တင်​တင်​လှိုင်​ + မိသားစုအား ယ​နေ့ …
မုံရွာမှာသီချင်းသွားဆိုရင်း လက်ဝတ်ရတနာ သိန်း(၁၀၀)ကျော်ဖိုးတောင် အခိုးခံလိုက်ရတယ် ဆိုတဲ့ မေသက်ထားဆွေ 😱😱😥
မေသက်ထားဆွေကတော့ မြန်မာသံစဉ် သီချင်းလေးတွေဆိုပြီး လူငယ် လူ ကြီး အား ပေး မှု ပရိတ် သတ် အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ သူ တစ် ယောက် ပါ။ နယ်ဘက်က ပွဲလမ်းသဘင်၊ အ လှူ ပွဲတွေ၊ ဂုဏ်ပြု ပွဲတွေ ဆို အမြဲလိုလို တွေ့မြင်ရတဲ့သူလေးလဲဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအခါမှာတော့ နယ်ပွဲလေးဖြစ်တဲ့ မုံရွာမြို့မှာ …
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးသာစည်မြို့နယ်ညောင်တိုကျေးရွာတွင်စိတ်ကျမ်းမာရေးချို့တဲ့ပြီးစကားပြောနည်းသူအမျိုးသမီးတစ်ဦးမကြာခဏအော့အန်မူးဝေနေ၍မိခင်ဖြစ်သူမှချော့မော့မေးမြန်းကြည့်ရာမှသားမယားအဖြစ်ပြုကျင်ခံရကြောင်းသိရသည်။ လွန်ခဲ့သည့်သြဂုတ်(၃)ရက်နေ့နံက်(၇)နာရီခန့်သာစည်မြို့နယ်ညောင်တိုကျေးရွာနေဒေါ်__(၅၀)နှစ်မှသမီးဖြစ်သူမ__(၂၀)နှစ်စိတ်ကျမ်းမာရေးချို့တဲ့စကားပြောနည်းသူမှမကြာခဏပျို့အန်နေပြီးမူးဝေနေ၍ဆေးခန်းသို့ခေါ်ဆောင်ပြသခဲ့ရာ ဆရာဝန်မှကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်ကြောင်းပြော၍ပြန်လာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်လည်းသမီးဖြစ်သူမ_မှာအစားမစားခြင်းမူးဝေခြင်းအော့အန်ခြင်းများဖြစ်နေသဖြင့်သမီးဖြစ်သူအားချော့မော့ပြီးအကြိမ်ကြိမ်မေးမြန်းခဲ့ရာသမီမ__၏ပြောပြချက်အရလွန်ခဲ့သော(၂)လခန့်ကတစ်ရွာတည်းနေစိုးမိုး(၃၄)နှစ်၏နေအိမ်သို့ရေခပ်သွားရောက်ခဲ့ရာစိုးမိုးမှ၎င်း၏နေအိမ်ပေါ်သို့ခေါ်ဆောင်ပြီးအလိုမတူပဲသားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်ခဲ့ကြောင်းပြောပြသိခဲ့ရကြောင်းသိရသည်။ ဖြစ်စဉ်အရစိတ်ကျမ်းမာရေးချို့တဲ့နေသည့်သမီးဖြစ်သူအားအလိုမတူပဲသားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်ခဲ့သူသာစည်မြို့နယ်ညောင်တိုကျေးရွာနေစိုးမိုးအားအရေးယူပေးရန်မိခင်ဖြစ်သုူမှသြဂုတ်(၁၃)ရက်နေ့တွင်ရဲစခန်းလာရောက်တိုင်တန်းချက်အရသာစည်မြို့မရဲစခန်း(ပ)၃၅၄/၂၀၁၉ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ၃၇၆ ဖြင့်အမှုဖွင့်အရေးယူပြီးပြစ်မှုကျူးလွန်သူစိုးမိုး(၃၄)နှစ်ညောင်တိုကျေးရွာသာစည်မြို့နယ်နေသူအားယင်းနေ့ည(၁၀း၁၅)အချိန်ရှာဖွေဖမ်းဆီးရမိခဲ့သဖြင့်အမှုနှင့်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ ရွှေမောင်မောင်(မိတ္တီလာ) credit ……………………………… unicode မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီးသာစညျမွို့နယျညောငျတိုကြေးရှာတှငျစိတျကမျြးမာရေးခြို့တဲ့ပွီးစကားပွောနညျးသူအမြိုးသမီးတဈဦးမကွာခဏအော့အနျမူးဝနေေ၍မိခငျဖွဈသူမှခြော့မော့မေးမွနျးကွညျ့ရာမှသားမယားအဖွဈပွုကငျြခံရကွောငျးသိရသညျ။ လှနျခဲ့သညျ့သွဂုတျ(၃)ရကျနနေံ့ကျ(၇)နာရီခနျ့သာစညျမွို့နယျညောငျတိုကြေးရှာနဒေျေါ__(၅၀)နှဈမှသမီးဖွဈသူမ__(၂၀)နှဈစိတျကမျြးမာရေးခြို့တဲ့စကားပွောနညျးသူမှမကွာခဏပြို့အနျနပွေီးမူးဝနေေ၍ဆေးခနျးသို့ချေါဆောငျပွသခဲ့ရာ ဆရာဝနျမှကမျြးမာရေးကောငျးမှနျကွောငျးပွော၍ပွနျလာခဲ့ပွီးနောကျပိုငျးတှငျလညျးသမီးဖွဈသူမ_မှာအစားမစားခွငျးမူးဝခွေငျးအော့အနျခွငျးမြားဖွဈနသေဖွငျ့သမီးဖွဈသူအားခြော့မော့ပွီးအကွိမျကွိမျမေးမွနျးခဲ့ရာသမီမ__၏ပွောပွခကျြအရလှနျခဲ့သော(၂)လခနျ့ကတဈရှာတညျးနစေိုးမိုး(၃၄)နှဈ၏နအေိမျသို့ရခေပျသှားရောကျခဲ့ရာစိုးမိုးမှ၎ငျး၏နအေိမျပျေါသို့ချေါဆောငျပွီးအလိုမတူပဲသားမယားအဖွဈပွုကငျြ့ခဲ့ကွောငျးပွောပွသိခဲ့ရကွောငျးသိရသညျ။ ဖွဈစဉျအရစိတျကမျြးမာရေးခြို့တဲ့နသေညျ့သမီးဖွဈသူအားအလိုမတူပဲသားမယားအဖွဈပွုကငျြ့ခဲ့သူသာစညျမွို့နယျညောငျတိုကြေးရှာနစေိုးမိုးအားအရေးယူပေးရနျမိခငျဖွဈသုမှသွဂုတျ(၁၃)ရကျနတှေ့ငျရဲစခနျးလာရောကျတိုငျတနျးခကျြအရသာစညျမွို့မရဲစခနျး(ပ)၃၅၄/၂၀၁၉ ရာဇသတျကွီးပုဒျမ၃၇၆ ဖွငျ့အမှုဖှငျ့အရေးယူပွီးပွဈမှုကြူးလှနျသူစိုးမိုး(၃၄)နှဈညောငျတိုကြေးရှာသာစညျမွို့နယျနသေူအားယငျးနညေ့(၁၀း၁၅)အခြိနျရှာဖှဖေမျးဆီးရမိခဲ့သဖွငျ့အမှုနှငျ့စဈဆေးဆောငျရှကျလကျြရှိကွောငျးသိရသညျ။ ရှမေောငျမောငျ(မိတ်တီလာ) credit